कोरोनाको नयाँ स्वरूप देखिन थालेपछि खाडीलगायतका मुलुकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोक्न थाले | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more कोरोनाको नयाँ स्वरूप देखिन थालेपछि खाडीलगायतका मुलुकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोक्न थाले
कोरोनाको नयाँ स्वरूप देखिन थालेपछि खाडीलगायतका मुलुकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोक्न थाले
पुस १४ गते, २०७७ - ०९:००
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूप देखिन थालेपछि खाडीलगायतका मुलुकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोक्न थालेका छन् । नेपाली श्रमिकहरूको मुख्य गन्तव्य मानिएको साउदी अरब, ओमान र कुवेतले केही समयका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोकिसकेका छन् ।
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ – त्यस्तै, खाडीका अन्य मुलुकहरूले पनि उडान रोक्ने तयारी गरिरहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले जनाएको छ । संघका सचिव मेघनाथ भुर्तेलका अनुसार कतार बाहेक मलेसिया र खाडीका मुलुकहरूले उडान रोक्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द हुन थालेपछि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदारहरू पुनः प्रभावित हुने उनको भनाइ छ ।
कुवेत सरकारले श्रमिकका लागि भिसा रोकेको भए पनि बिदामा रहेका श्रमिकहरूलाई कुवेत प्रवेशका लागि भने खुला गरेको छ । हाल कुवेतबाट जजिरा एयरलाइन्सले नेपालका लागि सातामा तीनवटा उडान भर्दै आएको छ । तर, नेपालबाट भने एयरलाइन्सले यात्रु लैजान रोक लगाएको छ । एयरलाइन्सले सातामा औसतमा ३ देखि ४ सय नेपाली श्रमिक कुवेतदेखि नेपालमा उडाउने गरेको राजदूत भण्डारीले बताए । तर, छुट्टीमा नेपाल आएका श्रमिकहरू भने युएई ट्रान्जिट हुँदै कुवेत पुग्ने गरेको उनले बताए ।
त्यस्तै, साउदी सरकारले पनि अर्को एक साता प्रतिबन्ध लम्ब्याउन सक्ने साउदीका लागि नेपाली राजदूत डा. महेन्द्रप्रसाद सिंहले बताए । उनका अनुसार साउदी सरकारले पठाएको पत्रमा नै थप एक साता लम्बिन सक्ने उल्लेख छ । ‘साउदी आउने वा नेपाल जाने कति श्रमिकले जहाजको टिकट लिइसकेका होलान् । उनीहरू प्रभावित हुने भए,’ उनले भने ।
हाल हिमालय एयरलाइन्सले साउदीमा दैनिक उडान भर्दै आइरहेको छ । खाडी मुलुकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा लगाएको प्रतिबन्ध थपिए नेपालको वैदेशिक रोजगार व्यवसाय धराशायी हुने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका सचिव मेघनाथ भुर्तेलले बताए । ‘कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिनले व्यवसायमा आशा जगाएको थियो,’ उनले भने, ‘तर, नयाँ भाइरसले पुनः निरुत्साहित बनाएको छ । यदि प्रतिबन्ध लम्बिने हो भने व्यवसाय नै विस्थापित हुने निश्चित छ ।’
चालू आर्थिक वर्ष ०७७–७८ को पहिलो चार महिनामा २० हजार ५ सय ७० ले श्रम स्वीकृति लिएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ । विभागका अनुसार सो अवधिमा ३ हजार ४ सय ६३ ले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका छन् । कात्तिक महिनामा ७ हजार ७ सय ९७ ले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । असोजमा ८ हजार ९७, भदौमा १ हजार ५ सय २५ र साउन महिनामा ३ हजार १ सय ५१ ले श्रम स्वीकृति लिएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, कुवेतले पनि १० दिन सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरेको छ । कुवेतले गत २२ डिसेम्बरदेखि जनवरी १ तारिखसम्मका लागि सबै खालका अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरेको कुवेतका लागि नेपाली राजदूत डा. दुर्गाप्रसाद भण्डारीले बताए । ‘सम्भवतः कोरोनाको नयाँ भाइरसका कारण उडान बन्द गरिएको हुनुपर्छ । तर, कुवेत सरकारले पठाएको पत्रमा भने निश्चित कारण स्पष्ट पारिएको छैन,’ उनले भने ।
कुवेत सरकारले अहिले १ जनवरी २०२१ सम्मका लागि उडान बन्द गरेको छ । यो प्रतिबन्ध अझ लम्बिन पनि सक्ने उनले बताए । तर, २७ तारिखदेखि भने साउदीले एकतर्फी बाटो खुलाएको छ । साउदीबाट बाहिरिन चाहनेका लागि हवाई उडान खुला गरिदिएको छ, तर साउदीभित्र प्रवेश गर्नका लागि भने रोक लगाएको छ  ।
दूतावासले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै नयाँ भाइरसको संक्रमणबाट बच्न कतार सरकारद्वारा अवलम्बन गरिएका निरोधात्मक उपायहरू पूर्ण रूपमा पालना गर्न आग्रह गरेको छ । कतार सरकारले अनावश्यक भिडभाड नगर्न, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्न, वेला–वेलामा साबुनपानीले हात धुन र स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ ।
नेपाल सरकारले पनि बेलायत हुँदै नेपाल आउने सबै उडानलाई रोक लगाएको छ । कोरोना महामारीको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै बेलायतबाट सुरु उडान वा ट्रान्जिट भई नेपाल आउने उडानलाई अर्को सूचना नभएसम्मका लागि रोक लगाइएको छ ।
पुस १४ गते, २०७७ - ०९:०० मा प्रकाशित